Kooxda Paxful: La kulan Shaqaalaheena
Nolosha ka jirta Paxful
La kulan dadkeena
Sida loogu biiro
La kulan kooxda Paxful!
Shaqaalaha Paxful waa wadnaha shirkadeena. Anagoo leh dhaqanno iyo aasallo kaladuwan, mar kasta dhexdeena ayaa wax faa'iidaysana, qaybta ugu fiican? Qof kasta wuxuu baran karaa luuqado iyo dhaqanno kaladuwan. Waa suurtagal inaan haysano shaqaale wax soosaar u go'ay laakiin barteenu waa natiijo ka timid shaqada wada jirka ah iyo fikradaha ay baxsheena shaqaalaha iyo waaxdu.
Gudiga Shirkada (Wadanka Maraykanka)
Waa maxay waxa aadan samayn karin hal maalin adoon adeegsan Paxful?
La kaftamida shaqaalaha ila shaqeeya.
Maxaa ku gu dhiiri geliya shaqada aad ka hayso Paxful?
Mustaqbalka. Shirkadaan waxay leedahay mustaqbal aad u wayn, waana ogahay inaan qayb wayn ka qaadan karo inaan gaarno guushaas.
Waa maxay halka wax ee ku saabsan Paxful/Dhaqaalaha P2P ood jeclaan lahayd in qof kasta ogaado?
Dadka ayaa na waydiiya sababta dhaqaalaha P2P muhiim u yahay. Baanka Aduunka ayaa qiray in ku dhawaad 2 bilyan oo dad ah aysan heli karin adeegyada dhaqaalaha ee caadiga ah. Paxful ayaa dadkaas siisa fursad ay kula shaqeeyaan nidaamka dhaqaalaha.
Madaxa Sare ee Ku dhaqanka xeerka (Maraykanka)
Wadista iyo tamarta wanaagsan ee Bitcoin ka dadka lagu gaarsiinaayo.
Waa maxay saamaynta ugu macnaha badan ee shaqadaada?
Waxaan masuul ka ahay xaqiijinta inaan iska qabano tuugada. Waxaan siiyay kooxdayda qalabka iyo nidaamyada ay shaqadaas ku fulinayaan. Wax dulqaad ah uma hayno khiyaanada iyo shaqo sharci daro ah oo lagu sameeyo barteena.
Bandhigaha Aalada Casriga ah (Philippines)
Waa maxay faa'iidada ugu fiican ee ay leedahay bartaan Paxful?
Waan jeclahay jiimka iyo faa'iidooyinka nasiinada! shirkadu waxay si dhab ah u daryeeshaa badqabka shaqaalaheeda arintaan ayaana kaa caawinaysa inaad nasato inta lagu jiro maalmaha ugu walaaca badan.
Waxaan doonayaa in dadku xog badan ka ogaadaan shirkada si guud. Ganacsiga dhaqaalaha P2P wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan, gaar ahaana la siinaayo dadka aan baanka lahayn.
Waa maxay munaasabada aad ugu jeceshahay shirkada Paxful oo aad ilaa iyo hadda ka qaybgashay?
Suuqgaynta Muuqaalka (Philippines)
Waxaa hamiga i siiya waa fursadaha aan dhammaadka lahayn ee bartaan ka jira. Xataa markaan intaan ka yaraa, way igu kalsoonaayeen anigga iyo shaqadayda. Waxay i siiyeen fursad aan ku muujiyo waxa aan samayn karo.
Markasta oo aan u baxno cabitaan, waxay isiisaa baashaal iyo qaab wanaagsan oon ula joogo shaqaalaha ila shaqeeya meel kabaxsan shaqada!
Shaqadayda ayaa ii sahlaysa inaan hamigayga u badalo shaqo taasna waxay isiinaysaa inaan saamayn ku yeesho dadka daawada muuqaalka aan samayno.
Qiimeeyaha Tayada Fikir Dhiibashada (Philippines)
Seeing the whole team improve, working at our best with genuine smiles on our faces. Being a part of that process for improvement keeps my drive going here at Paxful. And of course when the value of Bitcoin rises!
Waxaan doonayaa in qof kasta fahmo sida Bitcoin u shaqayso si guud iyo sida shaqada ganacsiga loogu sameeyo Paxful si ay fahan fiican uga qaataan in la khiyaamay iyo inkale.
Waa maxay waxa aad doonayso in Paxful ka guul gaarto ama samayso ka shirkad ahaan dhawrka sano ee soo socda?
Inay noqoto shirkada koobaad ee tignooloojiyada dhaqaalaha iyo barta ku ganacsiga P2P!
Ku cunista miraha fudud iyo lawska gudaha jikada, gaar ahaana cashew-ga.
Dadka aan la shaqeeyo iyo higsiyada shirkada ee ka caawiya dadka inay helaan adeegyada dhaqaalaha oo aysan haddi kale heleen.
Inay jiraan qaabab dhab ah, oo faa'iido leh oo lacag looga sameeyo Paxful iyo inaan qof kasta ahayn khiyaanoole.
Injineerka Kubernetes (Estonia)
Qaxwo aan la cabo saaxiibaday. Waa xili fiican inaan fikirkiisa maqlo qof aana barto waxa ka socda waaxaha kale. wada sheekaysiyada aan rasmiga ahayn ayaa badbaadin kara saacado badan oo lagu bixin lahaa shirar.
Jiimka, qado diyaarsan, maalmaha fasaxa. Hase yeeshee, waxa ugu muhiimsan ee badanaa la hilmaamo, waa in Paxful ay tahay shirkada ugu daacadsan ee aan waligay intaan noolaa u shaqeeyay. Waxay ka shaqeeyaan maalin kasta inay ku qanciyaan ayna ku dareesiiyaan inaad muhiim tahay.
Dhacdada ugu cajiibsan ayaa dhacday Maalmaheenii Xagaaga, markaasoo shirkada oo dhan, ayna ku jiraan qof kasta oo ka socda xafiisyada kale, la iskugu yimid safar isbarashada shaqaalaha ah oo lagu tagay Split, Croatia. Waxay ahayd arin cajiib ah inaan la kulmo shaqaalaha kale, aan barto qof kasta, aana dhisno ruuxiyada dhabta ah ee wada shaqaynta.
Ku dhaqanka (Hong Kong)
Natiijooyinka iyo xubnaha kooxdayda.
Maadaama aan iskudayayno waxaan awoodno si aan u difaacno labadaba iibiyaasha iyo iibsadayaasha! Ma doonayno inaan haysano BTC gaaga.
Aadista xafiisyada kaladuwan si aan u sameeyo booqashooyin iyo tababaro.
Maareeyaha Wakiilka (Estonia)
Waxaa jirta fursad kobac oo cajiib ah oo lagu baran karo xirfadaha shaqada iyo maamulka.
Dhammaan munaasabadaha Paxful waa kuwo xiiso leh! Laakiin waxaan si gaar ah u jeclaystay Maalamaha Xagaaga 2019, xiligaas oon asbuuc dhan joognay Croatia.